မလုံလောက်သေးသောအေဂျင်စီများကလမ်းလျှောက်ရန်အလားအလာများကိုပြောပါ | Martech Zone
လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ်ကကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီကိုစတင်မိတ်ဆက်စဉ်ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်ခဲ့သည့်တစ်ခုမှာအေဂျင်စီလုပ်ငန်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏တန်ဖိုးထက်ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်ကိုကျွန်တော်သိသည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆက်ဆံရေးဟာကောင်းကျိုးတွေအပေါ်လည်းများစွာမူတည်ပါတယ်။
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကသင့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးသင်နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသလား။ ကောင်းပြီ, ဒါကရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်ဆက်လက်ကျန်းမာဆက်ဆံရေးကို ဦး တည်သွားစေပါလိမ့်မယ်။ သင်၏ client ကိုနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်နောက်ကြီးမားသောကွန်ဖရင့်သို့သွားသောလက်မှတ်များကဲ့သို့အံ့အားသင့်စရာများဖြင့်သင်မိုးရေကျသလား။ သင့်ကိုဘယ်လို ၀ န်ဆောင်မှုပေးမလဲ။
သင်သည်သင်၏ client ကိုနှင့်အတူထောက်ပံ့ပေးခဲ့သလား အဘိုး? ဒါဟာတကယ်တော့တခြားသူတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတာဝမ်းနည်းစရာပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုမည်သို့မြှင့် တင်၍ ရှေ့သို့ရွေ့လျားသည်ကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအမြဲတမ်းဂုဏ်ယူသည်။ သူတို့ထဲကတချို့မဟုတ်တာကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့အံ့သြသွားတယ်။
နှစ်များတစ်လျှောက်ဖောက်သည်များယူလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာသောလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်သည် ကြောင့်လုံ့လဝီရိယ သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေစေမယ့်ဖောက်သည်လားဆိုတာသိဖို့သူတို့စမ်းသပ်နေသလောက်သူတို့အတွက်ကောင်းတဲ့ဂလိုင်းတစ်ခုသေချာစေဖို့။ တခါတရံမှာအလားအလာတွေကရှေ့ကိုတိုးချင်တယ်၊ တခါတရံမှာငါတို့ဟာခေါင်းဆောင်မှုနဲ့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးကိုတွန်းလှန်ပြီးထွက်ခွာသွားကြရတယ်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအကြီးကြီးတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်တောက်သောအခါသူတို့၏ဒါရိုက်တာအသစ်က“ မင်းရဲ့တံတားတွေကိုမမီးရှို့သင့်ဘူး” ဟုသတိပေးခဲ့သည်။ ငါသူ့ကိုသေချာလုပ်ဖို့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးဒါပေမယ့်ငါတို့တီထွင်ခဲ့တဲ့မဟာဗျူဟာကိုသူစွန့်ခွာခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်နှစ်များအတွင်းကုမ္ပဏီ၏အွန်လိုင်းဝယ်လိုအားကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာတိုးတက်စေခဲ့သည်။ သူဟာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်။ ဒါနဲ့သူကုမ္ပဏီမှထွက်ခွာသောအခါကျွန်ုပ်တို့ပြန်လာမည်ဟုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ငါနီးကပ်နေပြီဟုငါကြောက်ရွံ့ခဲ့သည် - ကုမ္ပဏီသည်ကျွန်ုပ်တို့အားထောက်ပံ့ပေးသောအရှိန်အဟုန်အားလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏တံတားများကိုသူနှင့်မီးရှို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်မကြာမီကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအား ထပ်မံ၍ ကူညီမည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့သည်အကူအညီအတွက်ဇိမ်ခံလက်လီအရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောင်းလဲနေပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်ကွန်ယက်ပါသောတက်ကြွသောပိုင်ရှင်သည်အရည်အချင်းရှိသောလူငယ်ပိုင်ရှင်အချို့အားစီးပွားရေးကိုရောင်းချခဲ့သည်။ သူဆက်သွားနေသော်လည်းသူ၏အမွေအနှစ်ကိုစိုးရိမ်ပြီးပိုင်ရှင်အသစ်များအောင်မြင်ရန်သေချာစေလိုသည်။ သူတို့မရှိတော့မှီခိုနိုင်ကတည်းက သူ၏ ကွန်ရက်ကသူကကျွန်တော်တို့ကိုအွန်လိုင်းအသိအမြင်တိုးမြှင့်ပေးနိုင်မလားဆိုတာသိအောင်ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်နိမ့်ကျနေသည့်ပြissuesနာများစွာကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးသူ၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်မကြာသေးမီကဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ သူကသူ့ကုမ္ပဏီ၏ ၀ ယ်လိုအားကျဆင်းလာသည်ဟုယုံကြည်သော်လည်း၊ အွန်လိုင်းတွင်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုနှင့်တိုးချဲ့မှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူ၏ဒေသခံလက်လီရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်တွင်စာရင်းဇယားများနှင့်နိုင်ငံအတွက်သွားနိုင်သည့်အတိုင်းအတာရှိသည်။ သူသည်သူ့ကွန်ယက်ကိုအားကိုးနိုင်သည့်အတွက်ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ကိုသူဘယ်တော့မှမလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ။
ဘတ်ဂျက်နှင့်အဆိုပြုလွှာများအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှသူသည်သူ၏ဘတ်ဂျက်သည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုပြန်တွန်းပို့ခဲ့သည်။ သူ၏ကွန်ယက်နှင့်၎င်းကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည့်နှစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ သူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ကြီးထွားရန်လိုအပ်သည့်တောင်းဆိုမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ သူဟာပိုက်ဆံဖြုန်းတီးနေသလိုခံစားရတယ်ဟုခံစားမိကြောင်းသူကတွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ သူသည်သူတည်ဆောက်ခဲ့သော site ကိုသူ့အလုပ်အတွက်လုံးဝအထောက်အကူမဖြစ်စေသည့်နေရာတွင်အစားထိုးရုံသာဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ ပါဝင်မှု၊ ရှာဖွေရေးအသိအမြင်၊ အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးစွမ်းရည်များစသည်တို့ကိုသူအားထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
ဥပမာနှစ်ခုစလုံးသည်မယုံနိုင်လောက်သောအလားအလာရှိသောကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်သည့်အလားအလာကိုရောက်ရှိရန်နှင့်ကြီးထွားစေရန်ကူညီခဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ဒေါ်လာသန်းချီ။ ကုမ္ပဏီ၏နိမ့်ကျသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါငါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ကိုသင်အာမခံနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယမှာဒေါ်လာသန်းချီ။ ရှိသော်လည်းပိုင်ရှင်ကကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြရန်မည်သို့ပင်ကြိုးစားပါစေ၎င်းကိုမမြင်နိုင်ပါ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကျနော်တို့အခြို့သောအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုညှိနိုင်ကြပါပြီနိုင်ပေမယ့်ငါကကူညီပေးခဲ့မယ်ဆိုတာသံသယ။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူထံမှ ၀ ယ်ယူရန်လိုအပ်ပြီး ၀ င်အပ်ကိုရွေ့လျားရန်အတွက်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ကိုပြန်လာပြီးထပ်မံဆွေးနွေးဖို့ပြောတဲ့အခါသူကကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုအသိပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သည်အခြားဖောက်သည်များအပေါ်ထားရှိသည့်အခွင့်အလမ်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုသောကျွန်ုပ်တို့တွင်အလားအလာရှိသည်။
သူကဒီဂျစ်တယ်နည်းဗျူဟာကိုပြen္ဌာန်းမလား။ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်မှာသူသည်သူအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်အေဂျင်စီအချို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အမြတ်အစွန်းများများစားစား၊ ပရောဂျက်တစ်ခု (သို့) စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုစတင်ထုတ်လွှင့်တဲ့အချိန်မှာ၊ ငွေအနည်းငယ်နဲ့ထွက်ခွာပြီးဖောက်သည်ကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး အေဂျင်စီများကဒီလောက်မဆာဘူး၊ လမ်းလျှောက်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကငါအဲဒီလိုပြောခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကငါအဲဒီလိုပြောခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါပြောတာကငါတို့အလုပ်ပဲ၊ ငါတို့ရဲ့အလားအလာနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုပညာပေးတယ်။ သူတို့လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သောတန်ဖိုးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသူတို့အသိအမှတ်မပြုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အမှားပင်။ ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာကိုအလားအလာနဲ့ဖောက်သည်တွေမတွေ့ရရင်အွန်လိုင်းပြိုင်ဘက်တွေဟာသူတို့ရဲ့နေ့လည်စာကိုစားနေကြတယ်၊ သူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာစုစုပေါင်း ၀ င်ငွေရဲ့စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေကိုရင်းနှီးမြှပ်နှံဖို့အလေးအနက်ထားဖို့လိုတယ်၊ ကိုယ့်တော့ဘူးရှင်းပြဖို့ကြိုးစားနေငါ့အချိန်ဖြုန်းဖို့မသွား။
ငါလွန်ခဲ့သောတစ်ပါတ်သို့မဟုတ်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ရှောင်ရှားခဲ့ပေ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ပြtheနာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်မကြာခဏရယ်စရာကောင်းသောနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်များ setting ။ ရလဒ်အနေနှင့်ဖောက်သည်သည်မည်သည့်အခါမျှအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါ။ သူတို့အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်သူတို့သည် ပို၍ ပင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။ လူတိုင်းကဒီပစ္စည်းပစ္စယဘယ်လောက်လွယ်ကူတယ်ဆိုတာပြောနေတယ်ဆိုရင် (ဒါမဟုတ်ရင်) ငါတို့မှာစက်မှုလုပ်ငန်းပြproblemနာလည်းရှိတယ်။
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? ငါတုံ့ပြန်မှုအတွက်အချိန်မတန်လား ဒီတစ်ခါလည်းငါလုပ်နေတာကြာပြီ၊
အရောင်းနှင့်စျေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်း - အနာဂတ်အတွက်ထိပ်တန်းဟောကိန်းများ